Afrika page 1
Axad 25 August 2019
Baarlamanka Kenya oo loo gudbiyey mooshin ku aadan muranka badda
Baarlamanka dalka Kenya ayaa loo gudbiyey mooshin ku wajahan xukuumadda, kaasi oo ku saabsan habka ay tahay inay u xaliso muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya, si baarlamanka u ansixiyo.
Sudan: Militariga iyo Mucaaradka oo Heshiis Gaaray
Wakiilka Midowga Africa u qaabilsanaa wada-xaajoodka ninka la yiraahdo Mohamed Hassan Lebatt ayaa heshiiska kaga dhawaaqay magaalada Khartoum. Sarkaalkan ayaa sheegay in labada dhinac ay si buuxda u ayideen heshiiska, balsa ma uusan bixin faah faahin dheeraad ah.
Congo: Dad hor leh oo laga helay Ebola
Xarunta Xakameynta Cudurrada ayaa ku warantay in ay shaqaale toban ka badan u dirtay magalada ku taalla xuduudda dalka Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ah ee Congo si ay u mareeyaan dadka uu cudurka Ebola halkaasi ku haleelay.
Warbixin: Sooyaalka afgambiyada Sudan
Sudan ayaa taariikh ahaan waxaa lagu yaqaan miltari awoodda afgambi kula wareega, waxaana dalkaas hadda uu ku jiraa xaalad kacsan, ayada oo mar kale ay awoodda gacanta ku hayaan militariga.
Cambaareyn ka dhalatay carruur lagu dilay Sudan
QM ayaa ku baaqeysa baaritaan lagu sameeyo dilka shan caruur iskuul ah oo ka dhacay dibad-baxyada ka socda dalka Sudan, xilli dibad-baxayaasha ay ku cadaadinayaan militariga xukuma dalkaas inay soo wareejiyaan talada.
Danjire Maxamuud Dirir oo ka warramay heshiiska Sudan
Muhaajiriin lagu la'yahay xeebaha Libya
Ugu yaraan 150 oo tahriibayaal African ah ayaa lagu la’ayahay badda Meditareeniyaanka, waxaana laga cabsi qabaa inay badda ku hafteen.
Dagaal ka qarxay dalka South Sudan
Dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo mintidiin diiday inay saxiixaan heshiis nabadeed ayaa talaadadii ka qarxay meel u dhow magaalada Jubba ee caasimadda dalka South Sudan, waxaas sidaa sheegay koox mucaarad ah.
Wasiirka maaliyadda Kenya oo musuq-maasuq loo xiray
Wasiirka maaliyadda Kenya ayaa maanta la xiray laguna soo oogay dacwado la xiriira musuq-maasuqa dhismaha laba biyo-xireen, waxaa sidaas maanta sheegay dacwad oogaha guud ee Kenya.
Shirkadda Lufthansa oo Joojisay Duulimaadyadeedii Qaahira
Shirkadda diyaaradaha dalka Germany ee Lufthansa ayaa Axaddii shalay joojisay duulimaadyadii diyaaraddaasi ku tagaysay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar
Rag Boosaaso Loogu Xiray Lacag ay ku Deeqday Dowladda Federalka
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegaya in maanta duhuraddii magaalada lagu xiray sadex nin oo ka tirsan Gudiga Dhismaha wadada magaalada Bosaso.
Warbixin Bangiyada Islaamiga ah ee Jabuuti
Bangiyada ku shaqeeya nidaamka Islaamiga oo bar yahan dambe aad uga shaqeyn jiray magaalada caasimadda ah Jabuuti ayaa haatan bilaabey iney ka hawl galaan magaalooyinka iyo gobolada kale ee uu ka kooban yahay dalkaas Jabuuti.